အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရကြွယ်ဝလိုသော် – ဆရာမျိုးကျော်မြင့် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Contributor, Columnist » အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရကြွယ်ဝလိုသော် – ဆရာမျိုးကျော်မြင့်	11
ယခုလိုနှစ်ဆန်းပိုင်း မင်္ဂလာရှိသည့်အချိန်ကာလတွင် မြန်မာလူမျိုးများအတွက်အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရလေးများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်ရန်နှင့်ရှောင်ရန်လေးများကိုဖော်ပြလိုပါသည်။
မိမိအတွက်ပင်ဖြစ်စေ၊ မိမိ၏သားသမီးလေးများအတွက်ပင်ဖြစ်စေ အင်္ဂလိပ်နာမည်လှလှလေးတွေလိုချင်သူများ၊ မှည့်လိုသူများသတိပြုဖို့လိုအပ်သည်လေးများရှိပါသည်။
အချို့အင်္ဂလိပ်နာမည်လေးများ၌ မကောင်းသည့်အဓိပ္ပါယ်လေးတွေရှိနေတက်လို့ ရှောင်နိုင်ရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ လူသိများသည် John ဆိုသည့်နာမည်လေးမှာ ယခုခေတ်တွင် မကောင်းသည့်အဓိပ္ပါယ်လေးတွေ ဒွန်တွဲပါလာခဲ့ပါပြီ။ တစုံတယောက်က “Where’s the John?” ဟုမေးလာခဲ့သော် John ဆိုသည့် အမျိုးသားကိုလက်ညှိုးမထိုးမိပါစေနှင့်။
ဤနေရာ၌ John မှာ Toilet သို့မဟုတ် rest room တနည်းအားဖြင့် အိမ်သာဘယ်မှာလည်း ဟုမေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။”John” ဆိုသည့်အမည်လေး၌ အခြားမကောင်းသည့်အဓိပ္ပါယ်ရှိပါသေးသည်။
ဆိုသည့်ဝါကျ၌ “John ၏အဓိပ္ပါယ်မှာ “မကောင်းသည့်အမျိုးသမီးများနှင့်ဆက်ဆံသူ” ဟူ၍ ပြန်ဆိုနိုင်ပါသည်။ မြန်မာလိုတော့ “ရဲများသည်မကောင်းတာလုပ်စားနေသည့် အမျိုးသမီးငါးဦးနှင့် ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်ငါးဦးကို ဖမ်းဆီးလိုက်သည်” ဟုပြန်ဆိုနိုင်ပါသည်။
အခြား သတိပြုစရာအမျိုးသားနာမည်တစ်ခုမှာ Thomas မှလာသည့် Tom ဆိုသည့် နာမည်လေးဖြစ်ပါသည်။ peeping Tom ဆိုသည့်စကားစုလေးကို ကြားဖူးကြပါလိမ့်မည်။” မသင့်တော် သည့်အရာများကို” တနည်းအားဖြင့် “မကြည့်သင့်သည့်ကိစ္စများကို” ချောင်းကြည့်တတ်သူဟု အဓိပ္ပါယ်ရှိပါသည်။
ထိုသို့ အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်နေသော နာမည်လေးကိုမိမိ၏သားသမီးများကို ပေးသင့်မပေးသင့်စဉ်းစားကြည့်ကြပါ။
မိန်းခလေးများရှောင်သင့်သည့်နာမည်လေးမှာ Jane ပင် ဖြစ်ပါသည်။မြန်မာလို “ရွက်ကြမ်းရေကြို ” ဟူသော ဝေါဟာရလေးကို အင်္ဂလိပ်လို plain Jane ဟုချောချောလှလှမိန်းခလေးများကို “ရွက်ကြမ်းရေကြို နှင့် ” အဓိပ္ပါယ်တူသော jane ဟူသော နာမည်မျိုးမမှည့်သင့်ပါ။
မိမိ၏အပေါင်းအသင်းရောင်းရင်းများထဲ၌ဖြစ်စေ၊အသိအကျွမ်းများထဲ၌ဖြစ်စေ jack ဟူသောအမျိုးသားတစ်ယောက်ရှိနေခဲ့လျှင်အထူးသတိပြုစေလို ပါသည်။ ခရီးသွားစဉ် မမျှော်လင့်ဘဲ jack ကိုလေယာဉ်ပေါ်၌တွေ့မိလျှင် Hi! Jack ဟုမနှုတ်ဆက်မိဖို့ အရေးကြီးပါသည်။ Hijack လေယာဉ်ကို ပြန်ပေးဆွဲပြီဆိုသည့် ဝေါဟာရလေးနှင့် အသံထွက်ဆင်သောကြောင့် ကံကောင်းလျှင်ထောင်ကျမည်။ကံမကောင်းလျှင် အပစ်အခတ်ပင်ခံရနိုင်ပါသည်။နှစ်ဆန်းပိုင်းတွင်ရှောင်သင့်သည့်ဝေါဟာရလေးများကို အတော်အသင့် ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ယခုဆောင်ထားသင့်သည့်ဝေါဟာရလေးများကို ဖော်ပြလိုပါသည်။
ဦးစွာပထမ ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်ဝေါဟာရလေးများကို ကြည့်ကြရအောင်။ US ရောက်မြန်မာအချို့မှာ နေထိုင်မကောင်းဖြစ်ရမှာကိုအလွန်ကြောက်ကြပါသည်။
Insurance ရှိခဲ့သည်ထားအုံး ၊ ဆေးရုံရောက်လို့ ဆရာဝန်နှင့်တွေ့သည့်အခါ မိမိခံစားနေရသော ဝေဒနာကိုမပြောနိုင်၊ မပြောပြတတ်၍ ဒုက္ခရောက်သူများရှိပါသည်။
ဥပမာ – လေထိုး လေအောင့်ဖြစ်နေသည်ဆိုပါစို့။ လေလည်ခြင်သော်လည်းမလည်နိုင်ဘူးဖြစ်နေကြောင်း အင်္ဂလိပ်လိုပြောပြတတ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မည်။ဒီလိုကသိကအောက်စကားစုလေးများကို dictionary ၌လည်းရှာရန်ခက်ပါသည်။ကြားဖူးနားဝနှင့် “I can’t fart. ” ဟုပြောမိလျှင် အဓိပ္ပါယ်တော့ ပေါက်သွားနိုင်ပါသည်။ ရိုင်းစိုင်းသည့် အသုံးအစွဲကြောင့် ရှက်စရာကောင်းပါသည်။စင်စစ် “I can’t break wind ” သို့မဟုတ်”I’m having trouble breaking wind.” ဟုပြောရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဗိုက်ကြီးကယ်ပြီးမရှူနိုင်မကယ်နိုင်ဖြစ်နေလျှင် Bloating ဟုပြောဆိုနိုင်ပါသည်။
ဆီးမသွားနိုင်ဘဲဆီးချုပ်နေလျှင် “I’m having trouble urinating.” ဟုယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြောဆိုင်နိုင်ပါသည်။ ဆီးခဏခဏသွားနေတက်လျှင် Frequent urination ဟု၍၎င်း၊ဆီး သွားတိုင်းနာလျှင် အောင့်လျှင် painful urination ဟူ၍၎င်း ပြောဆိုနိုင်ပါသည်။သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ခန္ဓာကိုယ်တနေရာရာ၌နာကျင်နေသည်ကို “I hurt here ” သို့မဟုတ် “I hurt there.” ဟုလူတိုင်းလိုလိုသုံးတတ်ပါသည်။သို့သော်နာတာမဟုတ်ဘဲ ကျဉ်နေလျှင် တချို့ကဘာပြောရမှန်းမသိတော့ပါ။
ဤနေရာ၌ Tingle ဆိုသည့်ဝေါဟာရလေးက အလွန်အသုံးဝင်ပါသည်။ “I feelatingling sensation.” ဟူ၍၎င်း “It tingles here .” ဟူ၍၎င်း သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။တကယ်တော့ သာမာန်နာတာထက် ကျဉ်နေတာကို ပို၍ကြောက်ရပါသည်။ဆရာဝန်နှင့်အမြန်ဆုံးတွေ့ရန်လိုအပ်ပါသည်။
နာလည်းမနာ၊ ကျဉ်လည်းမကျဉ်၊ ထုံရုံသက်သက်ဆိုလျှင်သာ ပိုကြောက်စရာ ကောင်းပါသည်။ကြောက်၍မဖြစ်ပါ။ ဆရာဝန်နားလည်ရန် ပြောပြနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါသည်။ထုံနေခြင်းကို Numb (b သံမပါ ) ဟုသုံးစွဲတတ်ပါသည်။
“I can’t feel anything on my right side . It’s all numb.” ဟူ၍ သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
မူးမော်ပြီး အော့အန်ခြင်နေလျှင် “I’m feeling nauseous.” ဟူ၍၎င်း ၊ခေါင်းမူးပြီးရီဝေဝေဖြစ် နေခြင်းကို “I feel dizzy .” ဟူ၍၎င်း သုံးစွဲရပါသည်။ခေါင်းမူးနေတာလည်း တိတိကျကျမဟုတ်၊ ခေါင်းကိုက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘဲ ခေါင်းကြီးအုံနေသည့်အခါမျိုး၌ “I’m feeling light-headed.” ဟူ၍ သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ ရောဂါနှင့်ပတ်သတ်လာလျှင် “Prevention is better than cure.” ဟူ၍ ပြောဆိုတတ်ကြပါသည်။
မြန်မာလိုတော့ “ရောဂါမဖြစ်ခင် ကြိုတင်ကာကွယ်ထားခြင်းဟာအကောင်းဆုံး” ပေါ့ ။ဒီတော့ မင်္ဂလာရှိတဲ့ နှစ်သစ်ခန်းမှာ ကျန်းမာရေးကိုလိုက်စားကြဖို့ သတိပေးလိုက်ပါရစေ။
အင်္ဂလိပ်လိုတော့ “Early to be and early to rise , makesaman healthy, wealthy , and wise.” မြန်မာတွေကတော့ “စောစောထလို့ စောစောလမ်းလျှောက်ကြပါစို့တဲ့” ။ ဒီလို စောစောထပြီး စောစောအိပ်ရင် ကျန်းမာချမ်းသာရုံမက ဥာဏ်ရည်တွေပါပွင့်လင်းလာမတဲ့။
တချို့က insurance မရှိတော့ စိတ်ညစ်ကြတယ်။စိတ်ညစ်စရာမလိုပါ။ “An appleaday, keeps the doctor away.” လို့ဆိုပါလား။ တစ်နေ့ပန်းသီးတစ်လုံးစားရရုံနဲ့တော့ ကျန်းမာရေးကို လုံးဝစိတ်ချလို့မရသေးပါ။ ပန်းသီးတို့လိမ္မော်သီးတို့ သစ်တော်သီးတို့နဲ့အတူ ဟင်းသီး ဟင်းရွက်များများစားပေးနိုင်ရင် ကျန်းမာမယ်ပေါ့။နောက်ဆုံးဆောင်ထားဖို့ကတော့ The right attitude ပေ့ါ။ တစ်နည်းအားဖြင့်apositive attitude လို့ဆိုပါရစေ။ မြန်မာလိုတော့ မှန်ကန်တဲ့စိတ်ဓါတ် အကောင်းမြင်တက်တဲ့စိတ်ဓါတ်လို့ဆိုရမှာပေါ့ ။
” ရေတဝက်ရှိနေသေးတဲ့ဖန်ခွက်တလုံးကို တချို့ကတဝက်ဘဲကျန်တော့ပြီဆိုပြီး စိတ်ဓါတ် ကျတယ်။ တချို့ကျတော့ တဝက်ရှိသေးတာဘဲဆိုပြီး ဝမ်းသာသွားတယ်။ ရှင်းပါတယ်နော်။ ဘဝကတော့ ဘဝပါဘဲ။ကိုယ့်ရဲ့အမြင်က အရေးကြီးပါတယ်။
မြင်တတ်ရင် အမြင်မှန်ရင် အားလုံးသာယာနေပြီးပျော်စရာကြီးပါ။ မမြင်တတ်ရင် အမြင်မမှန်ရင် အားလုံးစိတ်ညစ်စရာကြီးတွေပေါ့။စာဖတ်သူအားလုံး A positive attitude နဲ့ဘဝကို ရင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးရင်း ဒီလမှာ နားပါဦးမည်။
မှတ်ချက်။ ။ မြန်မာ့ဂဇက် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆တွင်ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြပြီးဖြစ်သည်။
ခင်ဇော် says: “An appleaday, keeps the doctor away.” တညားကတော့
ဆရာဝန်နဲ့ ဖူးစာ မစုံ မှာ စိုးလို့
အောင် မိုးသူ says: ဖတ်မှတ်သွားပါတယ် ဆရာ။
Tawwin Pan says: ဘိုလိုမှုတ်တတ်ချင်သော်လည်း ၀ီရိယနည်းလေသဖြင့် Copy ကူးပြီးသိမ်းထားလိုက်ပါဦးမယ်။ ဒါနဲ့စကားမစပ် ” လေလည်ခြင်သော်လည်းမလည်နိုင်ဘူးဖြစ်နေကြောင်း “-တွင် ယပင့်ဖြင့် ချင်ရမည်ဟု ထင်ပါကြောင်း။
kai says: ပုံနှိပ်ရမှာဆိုတော့.. ထောက်ပြတာ.. ကျေးကျေး.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12168
alinsett says: ဟွင်းးး ဟွင်း… ဒီလူကြီး…မြိုးတားဝူးးး
ရွာသူနဲ့ ရွာသားကို ခွဲခြားဆက်ဆံတယ်..
ရွာသူလေး ထောက်တာကျတော့… ပြုံးဖြီးဖြီးနဲ့… ကျေးဂျူး…တဲ့…
အနော် ထောက်တာကျတော့… သတ်ပုံကို သတ်ပြီးသာ ပုံထားလိုက်တဲ့…
ခင်ဇော် says: ဆက်ဆက် ကိုယ်စားးး
ဒလောက် အောင်ရဲလင်းးနဲ့ တူတာတောင် တဂျီးးက ခွဲခြားးခွဲခြားးးး
alinsett says: ဘာသဘောပဲ… ဖြစ်ရမယ်…
kai says: အောင်ရဲလင်းးထက်တောင်.. John တူတယ်လို့…။ Was this answer helpful?LikeDislike 6346
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: အိုင်ကန့်ထ် ဘူ
ပလိဇ် ဂစ်မီ အုချိန်တီ
Ma Ma says: ကြောင်ကြီးကို ပြောရင်တော့ ရမယ်။
ဒါ ကြောင် ဘာသာစကားးး်း
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .နာမည်တွေနဲ့ပါတ်သက်တာတွေခုမှကြားဖူးတယ်ဗျာ..ကျေးဇူးပါ